कैथिटर भेदी: सपना पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ उपकरण
आज, छेड्नु आत्म-अभिव्यक्ति तरिका को छ। यी punctures शरीर को कुनै पनि भाग मा गरेको र इच्छामा तिनीहरूलाई सुशोभित गर्न सकिन्छ। एक्रिलिक मोती, छड, Nostro, नाइटो आभूषण र यति मा: त्यहाँ छेड्नु लागि धेरै सामान छन्।
एक प्वाल पार्ने काम गर्न आदेश, एक कैथिटर शरीर छेड्ने लागि प्रयोग गरिन्छ। यो puncturing हुन्छ जो मार्फत एक सुई र चयन गरिएको शरीर भाग हो। भेदी लागि कैथिटर सामान्यतः अनुहार प्वाल पार्ने काम गर्न प्रयोग उत्कृष्ट, विभिन्न diameters छ। आफैमा, भित्र खाली छ सुई, यो छाला पियर्स र च्यानल मा सजावट छुटकारा मौका दिन्छ। यस्तो सुई धेरै सजिला छन् र शरीर भेदी को सबै प्रकार को लागि लागू छन्। लेजर तिखार्दै धन्यवाद, प्वाल पार्ने काम तत्काल र painlessly हुन्छ।
लागि कैथिटर बनेको भेदी शल्य स्टील, र यो जान्न महत्वपूर्ण छ एक सुई भनेर एक पटक मात्र प्रयोग गर्न छ। सजिलै पर्याप्त गरेका भेदी, तर यो गुणात्मक गर्न - एक आसान काम। यसलाई त्यसैले मात्र विशेष सैलून मा शरीर को कुनै पनि भाग पियर्स गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसलाई त्यहाँ प्रयोग सुई लेजर तिखार्दै थियो, तर बजार मा मुख्य रूप चिनियाँ fakes, सामान्य तरिकाले जमीन हो जो बेचन। यस कारण, ग्राहक ठूलो पीडा र बेचैनी महसुस हुनेछ।
भेदी लागि कैथिटर कसरी? को प्वाल पार्ने काम सुई को कैथिटर साथ सँगै हुँदा र त्यसपछि यसलाई हटाइएको र cannula ट्यूब वरिपरि छोट्याउन र च्यानल मा छोड छ। यो शरीर भेदी आभूषण सम्मिलित एक ट्यूब मार्फत छ। एक सुई खरीद, को (यो प्याकेज मा संकेत छ) आकार ध्यान। को सुई को व्यास चयन सजावट भन्दा ठूलो र व्यापक हुनुपर्छ।
तपाईं पसलहरूमा पनि छेड्नु लागि सबै बेच, उपकरण देखि लिएर र सजावट सबै प्रकारका समाप्त पाउन सक्नुहुन्छ। उपकरण लागि एक बन्दूक समावेश नाक छेड्ने, सुई, नाइटो निको gels, घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने मार्कर र यति मा clamps। तपाईं घरमा घायल गर्न निर्णय गर्छन् भने, safest साधन एक बाँझ प्याकेजमा एक बाली संग बन्दुक छन्। यो गरेर एक लोशन, मार्कर वा निको जेल किन्न सिफारिस गरिएको छ। पनि गैर-sterilized सुई बेचिएको र प्रयोगको कडाई निषेधित छ। तपाईं आफ्नो मा सुई कीटाणुरहित गर्न सक्षम हुनेछ आशा? शुद्धता अझै पनि ग्यारेन्टी छैन हुनेछ। यो प्याकेजमा सजावट संग पहिले नै sterilized र स्प्रे बन्दूक किन्न सर्वश्रेष्ठ छ।
शरीर छेड्ने लागि सबैभन्दा लोकप्रिय आभूषण को एक पट्टी को शीर्ष मानिन्छ। ती दुबै पक्ष घाउ छन् बल, spikes, शंकु, जो र यति मा एक ठूलो क्रस-खण्ड, को कोर प्रतिनिधित्व गर्छ। आन्तरिक र बाह्य मुद्दा: भेदी लागि रड दुई समूह विभाजित छन्। विभिन्न गहने को आयाम, कसैले शवर लागि रड चयन गर्न सक्नुहुन्छ। लम्बाइ, मोटाइ र रंग पनि फरक हुन सक्छ। मुख्यतया सजावट प्रयोग प्वाल पार्ने काम भाषा, नाक, गाला र उपास्थि। भेदी लागि रड छ रंग, आकार र आकार को एक किसिम अपेक्षाकृत सस्तो हो। तिनीहरूले पहिलो पटक सार्वजनिक प्रस्तावित गरिएको छ जब 1970, देखि लोकप्रिय छन्। छड, राउन्ड तेज, सपाट र convex हुन सक्छ।
एक किफायती मूल्य मा गुणवत्ता: मास्को मा Shugaring
आँखा वरिपरि छाला लागि मास्क। परम्परागत व्यञ्जनहरु
Epilators भौं: फारम, सबै भन्दा लोकप्रिय कम्पनी समीक्षा
सुक्खा ब्रश संग विरोधी सेल्युलाईट मालिश: समीक्षा
तिनीहरूलाई कसरी सामना गर्ने - खुट्टा मा Ingrown hairs?
बजार सैगमेन्टेशन के हो
वेरा नोव्कोवा एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री र एक सुन्दर पत्नी हो
Dunkan Aysedora: एक जीवनी। Aysedora Dunkan र Yesenin
तोरी रोटी: रोटी मिसिन लागि व्यञ्जनहरु, Multivarki, ओवन
येकाटिरिनबर्ग मा उपचार। Shcherbakova मा त्वचारोग संस्थान
भाइरस "आंतरिक मंत्रालय": तपाईँको कम्प्युटरबाट हटाउन कसरी?
डेल ल्याप्टप। समीक्षा र विवरण
सोची कहाँ छन्? सोची: रूस, क्रास्नोडार क्षेत्र